ဒီတပတ်တော့ ကမ္ဘာတလွှား လူပေါင်း သန်းနဲ့ချီ အကူးစက်ခံနေရတဲ့ Covid 19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရဲ့ mutation လို့ခေါ်တဲ့ သန္ဓေပြောင်းလဲမှု ဆင့်ကဲ ဖြစ်တာဟာ ဘယ်လောက် အရေးပါတယ် ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။ Utah ပြည်နယ် Brigham Young တက္ကသိုလ်က အဏုဇီဝဗေဒ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူ မခင်ဇာဝင်းပြည့် ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
မေး။.။“ mutation ဆိုတဲ့ သဘောလေးကို ရှင်းပြပေးပါ။ ပြောင်းလဲတဲ့ သဘောပေါ့နော်။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။ ။“မျိုးဗီဇ mutation ဆိုတာကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ရရင်တော့ မျိုးဗီဇ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်။ ဘယ်လိုမျိုး ပြောင်းသွားသလဲဆိုရင်၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေမှာ ဆိုရင် သူက လူကိုပဲ တိုက်ရိုက်ကူးတာ ရှိသလို တခြား သတ္တဝါတွေကနေ လူကိုပြောင်း ကူးလာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးေးတွလည်း ရှိတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် HIV လိုမျိုးပေါ့နော်။ သူက လူကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ မျောက်တွေမှာ ရှိနေတုန်းကတော့ သူက normal ပဲ။ သူ့ဟာသူ ဖြစ်နေတုန်းပဲ ပုံမှန် သမရိုးကျ ဖြစ်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက လူဆီကို ပြောင်းတဲ့ အခါကျတော့ လူတွေဆီမှာ ပိုပြီးတော့ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာတယ်။
အဲဒီလို တနေရာကနေ တနေရာကို ပြောင်းရင် မျိုးဗီဇက နဲနဲလေးတော့ ပြောင်းရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သူက သူကူးတဲ့ အကောင် မတူတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ဝင်ရတဲ့ပုံစံ၊ဝင်တဲ့အခါမှာ ဆဲလ် တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး ပေါင်းမယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူတွေရဲ့ ဆဲလ်တွေ ထဲကို ရောက်သွားပြီးရင် ဘယ်လိုမျိုး. Effect တွေ ပြန်ဖြစ်တယ် ဆိုတာတွေက ကွာသွားတယ်။ အဲဒီလို လူတွေရဲ့ ဆဲလ်တွေထဲရောက်ပြီးသွားရင် အသက်ရှင်လို့ ရအောင်လို့ သူတို့ရဲ့ မျိုးဗီဇ နဲနဲလေးတော့ ပြောင်းသွားတယ်။
မေး။. ၁ ။“ Covid 19 ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ SARS CoV2ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ဘယ်သတ္တဝါကနေ စပြီးရလာတယ် ဆိုတာ ပထမပြောပြပေးပါ။ ဘယ်မှာ စတယ် ဆိုတဲ့ origin လေးပေါ့နော်။”
SARS CoV2ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဘယ်သတ္တဝါတွေကနေ အဓိကကူးစက်နိုင်ပါသလဲ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။ ။“Covid 19 က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် family ဗိုင်းရပ်စ်ပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က သူ့ဟာသူ မိသားစုဗိုင်းရပ်စ် အကြီးကြီးတခု ရှိတယ်။ သူ့မှာ ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုလို့ရှိရင် လူတွေမှာ ဖြစ်နေကျ ပုံမှန်အတိုင်းက ဆောင်းတွင်းမှာ အအေးမိနှာစေး။ ချောင်းဆိုး၊ အဲဒီလိုမျိုး အအေးမိတဲ့ အခါမျိုး ကိုယ်တွေလက်တွေ နာမယ် အဲလိုမျိုး ဖြစ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပဲ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ် တခုက လူထဲဝင်သွားတယ် ဆိုရင် ဥပမာ အအေးမိလို့ဆိုရင် လူတွေက ဘာဆေးမှ မသောက်လဲ တပတ် ၂ ပတ်နေရင် သူ့ဟာသူ ပြန်ပျောက်သွားတာ ချည်းပဲလေ။ မကြာဘူးဆိုရင် သုံးလေးရက်နဲ့ အအေးမိတာက ပျောက်တယ်။ အဲဒါမျိုး ဗိုင်းရပ်စ် အဖွဲ့လိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူက အဲဒီမှာမှ အခုက SARS CoV2ပေါ့နော်။ သူက - သူ့ရဲ့ အစက သူ့ရဲ့ ancestors၊ သူ့ရဲ့ ဘိုးအေကီးက လင်းနို့တွေ ဆီက ကူးတာ၊ လင်းနို့တွေ ဆီမှာ ရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်။
အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကနေပြီးတော့ သူက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ တဆင့်ကူးတယ် ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ဆိုတာ တော့ သေချာ အတည်မပြုရ သေးပေမဲ့၊ လင်းနို့မှာ ရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကနေပြီးတော့ သူက နဲနဲလေး ပြောင်းသွားပြီးတဲ့ အခါကျမှ လူတွေဆီကို ရောက်လာတယ်ပေါ့။
သူ့မိသားစုဝင် ဗိုင်းရပ်စ်အုပ်စု ထဲမှာမှ အဖွဲ့လေးတွေက အများကြီး။ အဖွဲ့ခွဲက ၄ ဖွဲ့ ရှိတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ခွဲ ၄ ဖွဲ့မှာမှ အယ်လ်ဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာ၊ ဒယ်လ်တာ ၄ ခုရှိတဲ့ထဲမှာ ၂ ခုကသာ၊အယ်လ်ဖာနဲ့ ဘီတာ အဖွဲ့ ၂ ခု ကသာ လူတွေကို ကူးနိုင်တယ်။
ကျန်တဲ့ဟာတွေကကျတော့ နွားတွေ၊ ဆိတ်တွေ၊ ငှက်တွေမှာကူးတာ အမျိုးမျိုးပေါ့။ အခု ဖြစ်နေတဲ့ SARS CoV2ဆိုရင် ဘီတာပေါ့။ အယ်လ်ဖာ ကကျတော့ သူက ရိုးရိုး နှာစေးချောင်းဆိုး ဟာမျိုး။ အခု ဘီတာ အဖွဲ့မှာ ဆိုရင် ဆားစ် ဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်။ မားစ် ဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်၊ နောက် မားစ်လိုပုံစံမျိုး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု ဖြစ်နေတဲ့ SARS CoV2ဆိုရင် သူက သူနဲ့ မျိုးဗီဇချင်း ၉ ၆.၂ % တူတဲ့ဟာကတော့ လင်းနို့တွေဆီမှာ တွေ့ရပါတယ်။”
မေး။၂ “။လင်းနို့ တွေ ဆီမှာကနဂိုကတည်းက ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစုံရှိနေတာပါ။ အဲဒီတော့လူကို ကူးဖို့ဖြစ်လာစေတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးပြောပြပေးပါ။ ဒီလင်းနို့တွေ မှာရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က လူကိုဘယ်လို ကူးတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။ ။“ဆားစ်ရော မားစ် ရောက လင်းနို့တွေ ဆီက မူရင်းဖြစ်ပြီးတော့ သူက တဖြေးဖြေးနဲ့ ခလယ်ခေါင် ၊ ခလယ်ကြားခံကောင်ကို နောက်အဲဒီကနေပြီး ကူးလာတာ ပေါ့နော်။ အဆင့်ဆင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပြီးတော့ ကူးလာတာပါ။ ဒီလင်းနို့တွေ ဆီကနေ ဘယ်လိုမျိုး ကူးသလဲ ဆိုတာကတော့ အခုထိ ဒါကတိုက်ရိုက် ကူးသလား၊ ခလယ်ကြားခံကောင်ကနေ ကူးသလား အခုဒီ Covid 19 ဆိုရင် သူက ပြောနေကြတာက သူက သင်းခွေချပ်လို အကောင်မျိုးတွေ ဆီကနေ လူကိုကူး တာလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီလို သင်းခွေချပ်လို အကောင်ကနေ တဆင့်ခံ ကူးသလား ဒါကတော့ အငြင်းပွါးနေတုန်းပဲ ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာ တခုကတော့ သူ့ဗိုင်းရပ်စ်က လူဆီမှာ ရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့လင်းနို့ ဆီမှာ ရှိတဲ ဗိုင်းရပ်စ် ၂ ခုကို ယှဉ်ကြည့်မယ် ဆိုင်တော့ သိပ်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲတာ မရှိသေးဘူး၊ ရာခိုင်နှုန်း နဲနဲလေးပဲ ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီလို ပြောလို့ရတယ်။”
မေး။. ။“အဲဒီလို ပြောင်းလဲမှု သိပ်မရှိသေးတာက ဘယ်လောက် အန္တရာယ် ရှိပါသလဲ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။ ။“ပြောင်းလဲတာက သိပ်ပြီး မပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်၊ ဆိုလိုတာက မူရင်းကနေ လူဆီကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သိပ်မပြောင်းရ သေးဘူး ဆိုရင် သူ့မှာ ပြောင်းလဲ နိုင်ချေရှိနေတယ်။
SARS / MARS ဆားစ်တို့မားစ် တို့ မှာ - ဆားစ် ဆိုရင် သူ့ရဲ့ မူရင်း ဇစ်မြစ်နဲ့ဆိုရင် ၇၉ % လောက် တူတယ်။ နောက် မားစ် ဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ မူရင်းဇစ်မြစ်နဲ့ဆို၅၀% လောက် ပဲ တူတယ်။ အဲလိုမျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ်ပေါ့။ အခု ဒီကောင်ကတော့ ၉ ၆.၂ % လောက် တူတယ်ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ သူ့မှာထပ်ပြောင်းရင် ဘာတွေ ထပ်ပြောင်းဦးမလဲ ဆိုတာ တွေက ရှိတယ်။ ဟို လင်းနို့ဆီကနေ အပြီးအပိုင် သူက မပြောင်းရသေးဘူးပေါ့။ အသေအချာ မပြောင်းရသေးတော့ ၊ သူက လူတွေဆီကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အဲ အခါကျတော့ ရုတ်တရက် shock ရသလို ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီမှာ လူက ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမယ် လူရဲ့ ခုခံအားက သေချာ ဘယ်လိပြန်လုပ်ရမယ် ဆိုတ မသိဘူး ဖြစ်နေတယ် ပေါ့နော်။
အခုလုပ်နေတဲ့ ကုသဆေးတို့ ကာကွယ်ဆေးတို့က ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က spikes လို့ခေါ်တဲ့ ဆူးချွန်ကလေးတွေကို target ပစ်မှတ်ထား စမ်းသပ်နေကြတယ်။ တကယ်လို့ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်သွားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ရောဂါပေးနိုင်စွမ်းက ဒါမှမဟုတ် ရောဂါ ပြင်းထန်နိုင်စွမ်း တွေက ပြောင်းလဲ သွားမလား ဆိုတာ ကိုတော့ ကြိုပြီး သတိထားရမှာ စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။. ။“ဆိုတော့ ဒါက တော်တော် အန္တရာယ် ရှိတာပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့ မူလကနေ ပုံစံ ပြောင်းသွားတာနဲ့သူ အန္တရာယ် ပေးနိုင် တဲ့ ပုံစံက ပြောင်းသွားတာ ပေါ့နော်။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။ ။“ဟုတ်ကဲ့ ပြောင်းသွား ပါတယ်။ ၁ ၉ ၁၈ ။၁၉ ၂၀ လောက် မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆင်တုပ်ကွေး ဆိုကမ္ဘာ့ကပ်ပါ - Spanish Flu လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ Global flu pandemic လို့လည်း ခေါ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရင် first wave – second wave မှာ First wave က ဗိုင်းရပ်စ် မပြောင်းခင် ပေါ့နော်။ ဗိုင်းရပ်စ်က ကူးတယ် ပြီး ပြန်ကျသွားတယ်။ ကျသွားတဲ့ ဟာ ပြီးသွားလို့ရှိရင် နောက်တကြိမ် ထပ်ပြီး ကူးတယ်။ average ပျမ်းမျှ မှာ ဆိုရင် အခု အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကို target ပစ်မှတ်ထားမယ်၊ နောက် ရောဂါအခံရှိသူတွေကို ပစ်မှတ်ထားမယ်။
ဒါဟာ တကယ်လို့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်သွားပြီ mutation ဖြစ်သွားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် သူ့ရဲ့ target လုပ်တဲ့ population အုပ်စု ကလည်း ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။
အခု အသက်ကြီးတဲ့ သူ ရောဂါအခံရှိတဲ့ လူတွေ ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုပေမယ့် ပြောင်းသွားပြီ ဆိုရင် ၊ ရောဂါဖြစ်တာ ပိုပြင်းထန်လာပြီ ဆိုရင် တော့ လူငယ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ပုံစံ ပြောင်းသွားမယ် ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒါမျိုး မဖြစ်ရအောင် second wave မတိုင်ခင် ကာကွယ်ဆေးကို ထုတ်နိုင်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေတာပါ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပွံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ဒီတပတျတော့ ကမ်ဘာတလှား လူပေါငျး သနျးနဲ့ခြီ အကူးစကျခံနရေတဲ့ Covid 19 ဗိုငျးရပျဈပိုး ရဲ့ mutation လို့ချေါတဲ့ သန်ဓပွေောငျးလဲမှု ဆငျ့ကဲ ဖွဈတာဟာ ဘယျလောကျ အရေးပါတယျ ဆိုတာကို ပွောပွပေးပါမယျ။ Utah ပွညျနယျ Brigham Young တက်ကသိုလျက အဏုဇီဝဗဒေ ဘှဲ့လှနျကြောငျးသူ မခငျဇာဝငျးပွညျ့ ကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
မေး။.။“ mutation ဆိုတဲ့ သဘောလေးကို ရှငျးပွပေးပါ။ ပွောငျးလဲတဲ့ သဘောပေါ့နျော။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။ ။“မြိုးဗီဇ mutation ဆိုတာကို ဆီလေြျှာအောငျ ဘာသာပွနျရရငျတော့ မြိုးဗီဇ ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲသှားတာပေါ့နျော။ ဘယျလိုမြိုး ပွောငျးသှားသလဲဆိုရငျ၊ ဗိုငျးရပျဈတှမှော ဆိုရငျ သူက လူကိုပဲ တိုကျရိုကျကူးတာ ရှိသလို တခွား သတ်တဝါတှကေနေ လူကိုပွောငျး ကူးလာတဲ့ ဗိုငျးရပျဈမြိုးေးတှလညျး ရှိတယျ။ ဥပမာ ပွောရရငျ HIV လိုမြိုးပေါ့နျော။ သူက လူကို ပွောငျးခဲ့တယျ။ မြောကျတှမှော ရှိနတေုနျးကတော့ သူက normal ပဲ။ သူ့ဟာသူ ဖွဈနတေုနျးပဲ ပုံမှနျ သမရိုးကြ ဖွဈနတောပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူက လူဆီကို ပွောငျးတဲ့ အခါကတြော့ လူတှဆေီမှာ ပိုပွီးတော့ ရောဂါတှေ ဖွဈလာတယျ။
အဲဒီလို တနရောကနေ တနရောကို ပွောငျးရငျ မြိုးဗီဇက နဲနဲလေးတော့ ပွောငျးရတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ သူက သူကူးတဲ့ အကောငျ မတူတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့ ဝငျရတဲ့ပုံစံ၊ဝငျတဲ့အခါမှာ ဆဲလျ တှအေပျေါမှာ ဘယျလိုမြိုး ပေါငျးမယျ။ နောကျပွီးတော့ လူတှရေဲ့ ဆဲလျတှေ ထဲကို ရောကျသှားပွီးရငျ ဘယျလိုမြိုး. Effect တှေ ပွနျဖွဈတယျ ဆိုတာတှကေ ကှာသှားတယျ။ အဲဒီလို လူတှရေဲ့ ဆဲလျတှထေဲရောကျပွီးသှားရငျ အသကျရှငျလို့ ရအောငျလို့ သူတို့ရဲ့ မြိုးဗီဇ နဲနဲလေးတော့ ပွောငျးသှားတယျ။
မေး။. ၁ ။“ Covid 19 ရောဂါဖွဈစတေဲ့ SARS CoV2ဗိုငျးရပျဈပိုးဟာ ဘယျသတ်တဝါကနေ စပွီးရလာတယျ ဆိုတာ ပထမပွောပွပေးပါ။ ဘယျမှာ စတယျ ဆိုတဲ့ origin လေးပေါ့နျော။”
SARS CoV2ဗိုငျးရပျဈဟာ ဘယျသတ်တဝါတှကေနေ အဓိကကူးစကျနိုငျပါသလဲ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။ ။“Covid 19 က ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ family ဗိုငျးရပျဈပါ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက သူ့ဟာသူ မိသားစုဗိုငျးရပျဈ အကွီးကွီးတခု ရှိတယျ။ သူ့မှာ ပုံမှနျအတိုငျး ဆိုလို့ရှိရငျ လူတှမှော ဖွဈနကြေ ပုံမှနျအတိုငျးက ဆောငျးတှငျးမှာ အအေးမိနှာစေး။ ခြောငျးဆိုး၊ အဲဒီလိုမြိုး အအေးမိတဲ့ အခါမြိုး ကိုယျတှလေကျတှေ နာမယျ အဲလိုမြိုး ဖွဈတဲ့ ဗိုငျးရပျဈပဲ။ ဒီဗိုငျးရပျဈ တခုက လူထဲဝငျသှားတယျ ဆိုရငျ ဥပမာ အအေးမိလို့ဆိုရငျ လူတှကေ ဘာဆေးမှ မသောကျလဲ တပတျ ၂ ပတျနရေငျ သူ့ဟာသူ ပွနျပြောကျသှားတာ ခညျြးပဲလေ။ မကွာဘူးဆိုရငျ သုံးလေးရကျနဲ့ အအေးမိတာက ပြောကျတယျ။ အဲဒါမြိုး ဗိုငျးရပျဈ အဖှဲ့လိုပေါ့။ ဒါပမေယျ့ သူက အဲဒီမှာမှ အခုက SARS CoV2ပေါ့နျော။ သူက - သူ့ရဲ့ အစက သူ့ရဲ့ ancestors၊ သူ့ရဲ့ ဘိုးအကေီးက လငျးနို့တှေ ဆီက ကူးတာ၊ လငျးနို့တှေ ဆီမှာ ရှိတဲ့ ဗိုငျးရပျဈ။
အဲဒီဗိုငျးရပျဈကနပွေီးတော့ သူက တိုကျရိုကျဖွဈစေ၊ တဆငျ့ကူးတယျ ဆိုတာမြိုးလညျး ရှိတယျ။ ဘယျလိုမြိုး ဆိုတာ တော့ သခြော အတညျမပွုရ သေးပမေဲ့၊ လငျးနို့မှာ ရှိတဲ့ ဗိုငျးရပျဈ ကနပွေီးတော့ သူက နဲနဲလေး ပွောငျးသှားပွီးတဲ့ အခါကမြှ လူတှဆေီကို ရောကျလာတယျပေါ့။
သူ့မိသားစုဝငျ ဗိုငျးရပျဈအုပျစု ထဲမှာမှ အဖှဲ့လေးတှကေ အမြားကွီး။ အဖှဲ့ခှဲက ၄ ဖှဲ့ ရှိတယျ။ အဲဒီအဖှဲ့ခှဲ ၄ ဖှဲ့မှာမှ အယျလျဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာ၊ ဒယျလျတာ ၄ ခုရှိတဲ့ထဲမှာ ၂ ခုကသာ၊အယျလျဖာနဲ့ ဘီတာ အဖှဲ့ ၂ ခု ကသာ လူတှကေို ကူးနိုငျတယျ။
ကနျြတဲ့ဟာတှကေကတြော့ နှားတှေ၊ ဆိတျတှေ၊ ငှကျတှမှောကူးတာ အမြိုးမြိုးပေါ့။ အခု ဖွဈနတေဲ့ SARS CoV2ဆိုရငျ ဘီတာပေါ့။ အယျလျဖာ ကကတြော့ သူက ရိုးရိုး နှာစေးခြောငျးဆိုး ဟာမြိုး။ အခု ဘီတာ အဖှဲ့မှာ ဆိုရငျ ဆားဈ ဖွဈခဲ့တာရှိတယျ။ မားဈ ဖွဈခဲ့တာရှိတယျ၊ နောကျ မားဈလိုပုံစံမြိုး ဖွဈခဲ့တဲ့ဟာရှိတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခု ဖွဈနတေဲ့ SARS CoV2ဆိုရငျ သူက သူနဲ့ မြိုးဗီဇခငျြး ၉ ၆.၂ % တူတဲ့ဟာကတော့ လငျးနို့တှဆေီမှာ တှရေ့ပါတယျ။”
မေး။၂ “။လငျးနို့တှေ ဆီမှာကနဂိုကတညျးက ဗိုငျးရပျဈ မြိုးစုံရှိနတောပါ။ အဲဒီတော့လူကို ကူးဖို့ဖွဈလာစတေဲ့ အကွောငျးရငျးလေးပွောပွပေးပါ။ ဒီလငျးနို့တှေ မှာရှိတဲ့ ဗိုငျးရပျဈက လူကိုဘယျလို ကူးတယျဆိုတာ ပွောပွပေးပါ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။ ။“ဆားဈရော မားဈ ရောက လငျးနို့တှေ ဆီက မူရငျးဖွဈပွီးတော့ သူက တဖွေးဖွေးနဲ့ ခလယျခေါငျ ၊ ခလယျကွားခံကောငျကို နောကျအဲဒီကနပွေီး ကူးလာတာ ပေါ့နျော။ အဆငျ့ဆငျ့ ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲပွီးတော့ ကူးလာတာပါ။ ဒီလငျးနို့တှေ ဆီကနေ ဘယျလိုမြိုး ကူးသလဲ ဆိုတာကတော့ အခုထိ ဒါကတိုကျရိုကျ ကူးသလား၊ ခလယျကွားခံကောငျကနေ ကူးသလား အခုဒီ Covid 19 ဆိုရငျ သူက ပွောနကွေတာက သူက သငျးခှခေပျြလို အကောငျမြိုးတှေ ဆီကနေ လူကိုကူး တာလို့ ပွောတယျ။ အဲဒီလို သငျးခှခေပျြလို အကောငျကနေ တဆငျ့ခံ ကူးသလား ဒါကတော့ အငွငျးပှါးနတေုနျးပဲ ပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ သခြောတာ တခုကတော့ သူ့ဗိုငျးရပျဈက လူဆီမှာ ရှိတဲ့ ဗိုငျးရပျဈနဲ့လငျးနို့ ဆီမှာ ရှိတဲ ဗိုငျးရပျဈ ၂ ခုကို ယှဉျကွညျ့မယျ ဆိုငျတော့ သိပျပွီးတော့ ပွောငျးလဲတာ မရှိသေးဘူး၊ ရာခိုငျနှုနျး နဲနဲလေးပဲ ရှိသေးတယျပေါ့နျော။ အဲဒီလို ပွောလို့ရတယျ။”
မေး။. ။“အဲဒီလို ပွောငျးလဲမှု သိပျမရှိသေးတာက ဘယျလောကျ အန်တရာယျ ရှိပါသလဲ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။ ။“ပွောငျးလဲတာက သိပျပွီး မပွောငျးသေးဘူးဆိုရငျ၊ ဆိုလိုတာက မူရငျးကနေ လူဆီကို ရောကျတဲ့ အခြိနျမှာ သိပျမပွောငျးရ သေးဘူး ဆိုရငျ သူ့မှာ ပွောငျးလဲ နိုငျခရြှေိနတေယျ။
SARS / MARS ဆားဈတို့မားဈ တို့ မှာ - ဆားဈ ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ မူရငျး ဇဈမွဈနဲ့ဆိုရငျ ၇၉ % လောကျ တူတယျ။ နောကျ မားဈ ဆိုရငျလညျး သူ့ရဲ့ မူရငျးဇဈမွဈနဲ့ဆို၅၀% လောကျ ပဲ တူတယျ။ အဲလိုမြိုးတှေ ရှိခဲ့တယျပေါ့။ အခု ဒီကောငျကတော့ ၉ ၆.၂ % လောကျ တူတယျဆိုတဲ့ အခါကတြော့ သူ့မှာထပျပွောငျးရငျ ဘာတှေ ထပျပွောငျးဦးမလဲ ဆိုတာ တှကေ ရှိတယျ။ ဟို လငျးနို့ဆီကနေ အပွီးအပိုငျ သူက မပွောငျးရသေးဘူးပေါ့။ အသအေခြာ မပွောငျးရသေးတော့ ၊ သူက လူတှဆေီကို ရောကျတဲ့အခြိနျမှာ အဲ အခါကတြော့ ရုတျတရကျ shock ရသလို ဖွဈပွီးတော့ အဲဒီမှာ လူက ဘယျလိုပွနျလုပျရမယျ လူရဲ့ ခုခံအားက သခြော ဘယျလိပွနျလုပျရမယျ ဆိုတ မသိဘူး ဖွဈနတေယျ ပေါ့နျော။
အခုလုပျနတေဲ့ ကုသဆေးတို့ ကာကှယျဆေးတို့က ဒီဗိုငျးရပျဈရဲ့ ကိုယျပျေါက spikes လို့ချေါတဲ့ ဆူးခြှနျကလေးတှကေို target ပဈမှတျထား စမျးသပျနကွေတယျ။ တကယျလို့ ဆငျ့ကဲ ပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈသှားပွီ ဆိုလို့ရှိရငျ ဒီဗိုငျးရပျဈရဲ့ ရောဂါပေးနိုငျစှမျးက ဒါမှမဟုတျ ရောဂါ ပွငျးထနျနိုငျစှမျး တှကေ ပွောငျးလဲ သှားမလား ဆိုတာ ကိုတော့ ကွိုပွီး သတိထားရမှာ စဉျးစားဆငျခွငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။”
မေး။. ။“ဆိုတော့ ဒါက တျောတျော အန်တရာယျ ရှိတာပေါ့နျော။ သူ့ရဲ့ မူလကနေ ပုံစံ ပွောငျးသှားတာနဲ့သူ အန်တရာယျ ပေးနိုငျ တဲ့ ပုံစံက ပွောငျးသှားတာ ပေါ့နျော။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။ ။“ဟုတျကဲ့ ပွောငျးသှား ပါတယျ။ ၁ ၉ ၁၈ ။၁၉ ၂၀ လောကျ မှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ ဆငျတုပျကှေး ဆိုကမ်ဘာ့ကပျပါ - Spanish Flu လို့လညျး ချေါပါတယျ။ Global flu pandemic လို့လညျး ချေါတယျ။ အဲဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရငျ first wave – second wave မှာ First wave က ဗိုငျးရပျဈ မပွောငျးခငျ ပေါ့နျော။ ဗိုငျးရပျဈက ကူးတယျ ပွီး ပွနျကသြှားတယျ။ ကသြှားတဲ့ ဟာ ပွီးသှားလို့ရှိရငျ နောကျတကွိမျ ထပျပွီး ကူးတယျ။ average ပမျြးမြှ မှာ ဆိုရငျ အခု အသကျကွီးတဲ့လူတှကေို target ပဈမှတျထားမယျ၊ နောကျ ရောဂါအခံရှိသူတှကေို ပဈမှတျထားမယျ။
ဒါဟာ တကယျလို့ ဒီဗိုငျးရပျဈက ဆငျ့ကဲ ပွောငျးလဲမှု ဖွဈသှားပွီ mutation ဖွဈသှားပွီ ဆိုလို့ရှိရငျ သူ့ရဲ့ target လုပျတဲ့ population အုပျစု ကလညျး ပွောငျးသှားနိုငျတယျ။
အခု အသကျကွီးတဲ့ သူ ရောဂါအခံရှိတဲ့ လူတှေ ဖွဈတတျတယျ ဆိုပမေယျ့ ပွောငျးသှားပွီ ဆိုရငျ ၊ ရောဂါဖွဈတာ ပိုပွငျးထနျလာပွီ ဆိုရငျ တော့ လူငယျတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျ။ ကလေးတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး ပုံစံ ပွောငျးသှားမယျ ဆိုရငျ ပိုပွီးတော့ ဆိုးလာနိုငျတယျ။ အဲဒီတော့ ဒါမြိုး မဖွဈရအောငျ second wave မတိုငျခငျ ကာကှယျဆေးကို ထုတျနိုငျဖို့ စိုငျးပွငျးနတောပါ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့ရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပှံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။